Iyada oo la horumarinaayo tikniyoolajiyada, soo bixitaanka Touch All ee One Kiosk ayaa ka dhigaya nolosha dadka mid aad u habboon oo caqli badan. Si kastaba ha noqotee, tikniyoolajiyadu waa seef laba af leh. Iyada oo tirada sii kordheysa ee tirada alaabooyinka, suuqa uu bilaabay inuu u muuqdo mid jahwareersan, iyo alaabooyin aad u badan ayaa soo ifbaxaya, taasoo ka dhigaysa tayada mid aan hagaagsaneyn.
Marka sidee ayaad u dooran kartaa qalab qiimo-ku-ool ah?
Shaashadda LCD Touch Screen waxaa badanaa lagu isticmaalaa mashiinka, sidaa daraadeed tayadiisu waa muhiim. Qiimaha shaashadda asalka caan ah ee loo yaqaan 'LCD Screen' ayaa waxyar ka sarreeya, laakiin muuqaalka iyo saamaynta muuqaalka gebi ahaanba way ka duwan yihiin. Shaashadda LCD oo tayo liidata ayaa runtii ah mashiinka oo dhan guuldareysiga inta la isticmaalayo. Kaliya intaas kaliya ma ahan, laakiin tayada shaashadda taabashada ayaa waliba fure u ah shaashadda. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira taabasho resisisation, taabsi awood leh iyo taabasho infrared suuqa. Midka caanka ah waa mid taabasho badan taabanaya, taabashada dareenka ayaa aad u sarreeya, taabashada tababbarka sidoo kale waa mid aad u wanaagsan. Isticmaalayaashu waa inay doortaan iyadoo loo eegayo ujeedooyinkooda iyo shuruudahooda goorta doorashada la sameynayo.
2. Waxqabadka Waxsoosaarka
Ka sokow adeegsiga mashiinka wanaagsan, wax qabadkeeda gaarka ah iyo waxsoosaarka sheyga ayaa si gaar ah muhiim u ah. Mashiinka isku-dhafan ee taabashadu waa aalad wax soo saar oo isku-dhafan kombuyuutar iyo soo-bandhig, iyo softiweerka u dhigma ayaa loo qaabeeyey inuu buuxiyo baahiyaha isticmaaleyaasha. Ka dib marka hore hubi dhalaalka, xalka iyo waqtiga jawaab celinta aaladda iyo qaabeynta qofka martida loo yahay markaad wax iibsaneyso. Marka labaad, hubi shaqada softiweerka taabashada si aad u aragto inuu buuxiyo baahiyadeena dhabta ah.
Macaamiisha, iibsigu ma ahan oo keliya aalad fudud, iibsigu waa xirfadle taabasho soo-saaraha guntin-ka-dhan. Sidaa darteed, hanaankan, waa inaan si buuxda u baarnaa tayada adeegga soo-saaraha si loo hubiyo inaysan jiri doonin wax walaac ah habka isticmaalka mustaqbalka.
Marka la soo koobo, marka lagu daro saddexda qaybood ee qodobka si loo isbarbardhigo, xaqiiqdii waxaan iibsan doonnaa qalab wax soo saar oo qaali ah.